Mmezu ọrụ mmezu | Ọrụ mmezu China na-eme mkpọtụ & ahia
Ọrụ Mmezu China
Olee otu nhota na mkpọ ọrụ enyere ndị ahịa aka? Onye ahịa ahụ kwuru: O juru m anya na ngwugwu ngwaahịa a mara ezigbo mma, ngwaahịa a emebibeghị, onye ahịa ahụ nwekwara afọ ojuju. —— Roman na-Anyị na-enye a n'ụzọ zuru ezu bespoke bulie na mkpọ mmezu ọrụ ahaziri iji kwekọọ azụmahịa gị mkpa! 99.6% buru oke ọnụego zuru ezu jikọtara na weebụsaịtị gị na ire ere akpaka akpaghị aka na-achịkwa mmelite Otu ọrụ ụbọchị ndị ọkachamara ejiri Iwu nweta ...
Gịnị bụ ọrụ mmezu? Ọrụ mmezu bụ ụlọ nkwakọba ihe nke atọ na-akwadebe ma bupu iwu gị maka gị. Ọ na-eme nke a site na mmezu ya. Ọrụ mmezu Ecommerce dị mma maka azụmaahịa na-achọghị ịmekọrịta ụgbọ mmiri ma ọ bụ karịa ikike ịchekwa ihe dị ugbu a ruo ebe ha na-enweghị ike izipu iwu onwe ha ọzọ. Mmezu akpaaka 1. Sunson API na - enyere gị aka ijikọ weebụsaịtị gị ma mekọrịta data. 2.Ibanye na anyị ...
Stụnanya dị mfe Shopify iji mezuo ya na Sunsonexpress. Anyị na-enyere ndị ahịa Shopify aka mezuo iwu ngwa ngwa na ọnụ ahịa-dị ka o kwere mee iji nweta atụmanya ndị ahịa ha. Shopify jikọtara ọnụ na sọftụwia anyị iji mezue mmezu yana njikwa ngwa ahịa, na-ahapụ gị ilekwasị anya n'ire na ịzụlite azụmaahịa gị - anaghị echegbu onwe gị maka mmezu Order. Mwepụta dị mfe Jikọọ ụlọ ahịa Shopify gị na sọftụwia zuru ezu nke Sunsonexpress n’ime usoro ole na ole dị mfe. Jikọọ ụlọ ahịa gị ...
Jiri Aka Gi tinye Aka Onwe Gi! Upgragbakwunye ụdị 1. dinggbakwunye ntinye ahịa iji mee ihe masịrị gị ma jigide ndị ahịa gị. 2. ackghaghachi ngwaahịa gị na igbe ahaziri iche, n'ụdị ị họọrọ. 3. Kitting na nzukọ welie gị ọkọnọ yinye na mfe nkesa usoro. 4. Lableling bụ usoro nsogbu ma dị mkpa ka anyị wee weghara ya maka gị, anyị na-etinye aha mmado n'ụzọ dabara adaba iji hụ na ngwaahịa gị. Chain Service na a ngwa ngwa na-akpụ akpụ ma ...
Nye ụlọ nkwakọba ihe na-arụ ọrụ nke ọma, nchekwa na n'efu na China Anyị nwere ụlọ nkwakọba ihe 3000 + na Shenzhen ， Nye n'efu maka ọnwa atọ maka ndị ahịa ọhụrụ, yana n'efu mgbe 3month dabere na ị nwere ma ọ dịkarịa ala 60Pcs iwu mbupu kwa ọnwa house 3000m² nkwakọba nwere ike izute gị na-eto eto yiri nkata mkpa ， ngwa ngwa hazie gị iji na-akwadebe maka Mbupu. Anyị China nkwakọba na-gị na ngwaahịa mma ， zuru ezu na 24/7 nche onyunyo na mkpuchi. Step1 ： Nkwakọba Recei ...
Uru nke ịda mba na nsị bụ nnukwu azụmaahịa azụmaahịa maka ndị ọchụnta ego na-achọ ịmalite n'ihi na enwere ike ịnweta ya. Na ịda ada, ị nwere ike ịnwale ngwa ngwa azụmaahịa dị iche iche na enweghị oke, nke ga - enyere gị aka ịmụ ọtụtụ ihe gbasara etu esi ahọta na ịre ngwaahịa na ngwa ahịa. Ndị a bụ ihe ole na ole ndị ọzọ mere ọdịda dị ka ụdị ihe a ma ama. 1. Obere ego achọrọ ma eleghị anya uru kasịnụ dị na mmiri ahụ bụ na ọ ga-ekwe omume ịmalite ụlọ ahịa ecommerce ...